China (Beijing) International Buddhist Ihe na Ngwa Expo 2022
Oil&nonoil-S&tc will be held in Veronafiere, Verona, Italy
Chem Expo Philippines will be held in World Trade Center Metro Manila, Pasay, Philippines
Ihe ngosi Buddhist mba ụwa nke China (Beijing) 2022
Ụlọ Ọrụ Weebụ https://www.bagevent.com/event/2157832
China (Beijing) International Buddhist Ihe na Ngwa Expo
China (Beijing) Ihe Buddhist International na Expo Expo (Beijing buddhist expo) ga-enwe na China ngosi ngosi center (sanyuanqiao hall).Ihe ngosi a ga-aga n'ihu na-agbaso "na-ebugharị ọdịnala ọdịnala ndị China, na-akwalite mmekọrịta mmadụ na mmepe" nke ebumnuche nke ngosi ahụ, lekwasị anya na ụlọ ọrụ ahụ iji mepụta usoro nke buddhist na-ekesa, mgbanwe ọdịnala Buddhist na mmụta ọdịnala ọdịnala dịka otu nke ikpo okwu di elu.N'ịdabere na ọnọdụ ọdịbendị siri ike na isi obodo ahụ, ihe ngosi a ga-elekwasị anya na ngosipụta nke akpụrụ akpụ Buddha, aloes na arịa ndị na-esi ísì ụtọ, nri ndị anaghị eri anụ, tii zen na ngwaahịa ndị ọzọ na nka na nka, iji mepụta ngosipụta nwere ọdịbendị pụrụ iche na China.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe omume iri na abụọ na-arụ n'oge a
Ebe ngosi nke Beijing Buddha expo gafere 40,000 square mita, a na-atụ anya na ụlọ ọrụ karịrị 1,000 ga-esonye. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe omume iri na abụọ na-arụ n'oge a, iri puku kwuru iri puku ndị ọbịa nwere ike ịnweta, gee ntị, nwee ekele na ịghọta nnukwu ihe buddhist omenala ndorondoro.
Akụkụ abụọ nke nsogbu Buddhist na-eweta ụlọ ọrụ na-ejikọ aka iji gosipụta ihe akpụrụ akpụ nke Buddha
Akụkụ abụọ nke nsogbu Buddhist na-eweta ụlọ ọrụ na-ejikọ aka iji gosipụta ihe akpụrụ akpụ nke Buddha.Site na Taiwan, fujian, zhejiang, guangdong na mpaghara na obodo ndi ozo, iri puku kwuru iri iberibe osisi, ihe akpụrụ akpụ, nkedo ọla kọpa, okwute okike, ịmụ nwa na Buddha ndị ọzọ buru ibu ma pere mpe, oriọna iko, ngwaahịa na-akwado ụlọ nsọ ga-egosipụta n'ụzọ doro anya. mepụta ụdị zen mara mma nke China.
Ihe karịrị ndị ọbịa 82,000 sitere na mpaghara 17 na obodo dị n'ebe ugwu China
Ihe karịrị ndị ọbịa 82,000 sitere na mpaghara 17 na obodo mgbago mgbago ugwu China, gụnyere hebei, shanxi, liaoning na Inner Mongolia, nọ na ngosi ahụ. N'ime ha, ndị mọnk 5,300 si n'ụlọ arụsị dị na mpaghara 10 na obodo ndị dị na mgbago ugwu China, gụnyere Beijing, hebei, shanxi, henan na Inner Mongolia.N'otu oge ahụ, ụlọ arụsị ọhụrụ ndị dị na mgbago ugwu, nkwadebe nke ụlọ nsọ a kpọkwara onye dị mkpa na-ahụ maka ihe ngosi maka mgbasa.
1. Buddha awụ: osisi ịkpụ, okwute okwute, poselin, ọla akpụrụ akpụ, resin, matte gold, jade ịkpụ, amba, kristal, raw lacquer, Buddha sere, wdg;
2. Incense: ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ihe nsure ọkụ na-egbu opi, obere ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ nke India, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ụlọ elu ihe nsure ọkụ, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ;
3. Ngwaọrụ Buddha: niches, ụlọ nsọ, beads Buddha, azụ osisi, efere ọla kọpa, tebụl wax, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ite, efere ụtụ, iko ọcha, mmiri ofufe, igwe ekpere Buddha, stupas, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ite, dharma mejuputa , electronic buddhist akụkụ Akwụkwọ Nsọ, ọlaedo na ite ọla kọpa, ịwụ ọla edo, ịwụ jubao, ụlọ ezinaụlọ buddhist, wdg;
4. kandụl: kandụl nka, kandụl na-enweghị anwụrụ, kandụl lotus, ọgụ kandụl, kandụl kristal, ghee kandụl, kandụl nkịtị, wdg;
5. Obí na arịa ụlọ nsọ: ịgbà, mgbịrịgba, oriọna eze, ọmarịcha ụlọ nsọ, arịa ụlọ gboo, ebe ngosi ihe ngosi nka, wdg;
6. Oriọna: oriọna Buddha, oriọna lotus, oriọna kandụl, oriọna mmanụ, mmanụ oriọna, ihe nsure ọkụ eletrik, wdg;
7. Sangha embroidery: sangha akpụkpọ ụkwụ, embroidery ngwaahịa, virga house series, auspicious embroidery akpa, Buddhist hall decorations, wdg;
8, ngwaahịa ngwaahịa: akwụkwọ edo, gold ingot, akwụkwọ edo edo, ngwaahịa akwụkwọ, wdg;
9. Buddhist calligraphy na eserese ọdịyo na vidiyo: Buddha, eserese ala, Buddhist calligraphy, sutras, ihe osise Afọ Ọhụrụ, Ngwa Musical, Buddhist sutras ọdịyo na vidiyo, wdg;
10, ihe ndi Buddhist na ihe ndi ozo: oru ndi Buddha, nka okpukpe, kaiguang ihe icho mma, nkpuru ihe ndi ozo, onyinye di nma, ubochi ubochi, green / white tara, thangka, ihe icho mma, sachet, wheel ekpere, wdg.
Akụkụ nke aloes na-egosipụta:
1. Okwu mmalite nke ụlọ ọrụ aloes, ụlọ ọrụ nyocha na mmepe na ọrụ;
2. Ngwa aloes na ọrụ aka: osisi aloes, ụdị ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ niile, linincense, obere pan ihe nsure ọkụ aloes na aloes na-enye ngwongwo, ihe ịchọ mma ịchọ mma, ịkpụ, eriri aka na ọrụ ndị ọzọ;
3. Ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ: ihe eji eme ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, ihe ndị na-esi ísì ụtọ na nhazi, ihe ndị na-esi ísì ụtọ, wdg.
4. Ugwu ala ubi: osisi aloes, osisi aloes, wdg.
5. Ihe ndi ozo n’enye n’ahu: ihe di iche, ihe di iche, ihe ojoo, ihe ojoo, ihe ojo.
Buddhist isiokwu ngosi ebe niches na oge ochie na ngwá ụlọ ngosi ebe temple omenala ngosi mpaghara
Charity ngosi ebe nri anaghị eri anụ ebe ngosi zen ndụ ngosi ebe
Zen tii na-acha odo odo ájá art ngosi ebe
South Korea Pavilion, Nepal Pavilion, Sri Lanka Pavilion, Vietnam Pavilion, Taiwan Pavilion
Otu n'ime Obi Ọma Oge Gosi
Ihe ngosi Newark Quilt
Ụdịdị dị iche iche Miami